Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Amawayini & Imimoya » Izindlu zeChampagne zaseFrance zigubha unyaka wokuqopha ngokudlabha
Ukuthunyelwa okuphelele kweChampagne kweqe amabhodlela angama-32% kuye kwangama-322 ezigidini, naphezu kwemiphumela eqhubekayo yokuvalwa kobhubhane lwe-COVID-19, okuholele ekuvalweni kwamabha nezindawo zokudlela eziningi.
Inhlangano yabakhiqizi be-champagne yaseFrance irekhoda irekhodi elithosiwe lika-2021 lokuthengisa nokuthekelisa ngaphandle kuleli sonto.
Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, emele abalimi bewayini baseFrance abangaphezu kuka-16,000 kanye nezindlu ze-champagne ezingu-320, bamemezele ukuthi France yathumela kwamanye amazwe amabhodlela e-champagne ayizigidi eziyi-180 ngo-2021, okuwukunyuka kwama-38% uma kuqhathaniswa no-2020.
Ukuthunyelwa okuphelele kweqe amabhodlela angama-32% kuye kwangama-322 ezigidini, naphezu kwemiphumela eqhubekayo yokuvalwa kobhubhane lwe-COVID-19, okuholele ekuvalweni kwamabha nezindawo zokudlela eziningi.
Sekukonke, ukuthengiswa komhlaba wonke kufinyelele irekhodi elilinganiselwa ku-$6.2 billion.
"Lokhu kululama kuyisimangaliso esamukelekile kubantu baseChampagne ngemuva kwezinkinga zika-2020 (nezibalo zehle ngo-18%) ezithintwe ukuvalwa kwezindawo ezisetshenziswayo kanye nokushoda kwemicimbi yokugubha umhlaba wonke," kusho uMaxime Toubart, ngokubambisana naye. umongameli we Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne.
Inhlangano ibike ukuthi isidingo siqale ukukhula kancane kancane ngo-Ephreli 2021, ichaza ushintsho ngokuthi "abathengi bakhethe ukuzijabulisa ekhaya, banxephezela isimo esidabukisayo ngezikhathi ezintsha zokuhlalisana nokwabelana."
'I-Champagne' yigama lomkhiqizo elikhethekile elisetshenziselwa iwayini elikhiqizwe kulo France's Champagne region, enyakatho-mpumalanga yeParis. Abalimi bewayini be-Champagne babe nonyaka onzima ngo-2021, lapho le ndawo yahlaselwa isithwathwa esinamandla entwasahlobo, esilimaza u-30% wezitshalo, kanti isikhutha siholele ekulahlekeni kokufika kokungu-30%.
Covid-19 Ubhubhane lwe-COVID-19 France